Garabkii kasoo horjeeday Shariif Xassan Sh. Aadan oo maantay kulan uga furmay aqalkii hore ee baarlamaanka Soomaaliya. – Radio Daljir
Garabkii kasoo horjeeday Shariif Xassan Sh. Aadan oo maantay kulan uga furmay aqalkii hore ee baarlamaanka Soomaaliya.
Janaayo 3, 2012 12:00 b 0
Moqdisho, January, 2012 ? Xildhibaannadii kasoo horjeeday guddoomiyenimada Shariif Xassan Shiikh Aadan ayaa maantay ku sharay aqalkii hore ee baarlamaanka Soomaaliya, kaddib markii shalay gacan-qaad uu dhex-maray iyaga iyo garabkii taageersanaa Shariif Xassan Shiikh Aadan.
Xildhibaanad Bishaaro Cabdi Garafeey oo ah guddoomiyaha guddiga gaadiidka ee golaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegtay in shir ballaaran goluhu maantay ay ku yeesheen xaruntii hore ee baarlamaanka, kulankaasi oo aqoonsiyadooda ay ku keensanayeen murashaxiinta u tartamaya xilka guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya.
Xildhibaanad Bishaaro Cabdi ayaa si adag u dhaleecaysay gacan-qaadkii shalay dhex-maray golaha baarlamaanka, waxaana ay dhaleecayn dusha uga tuurtay garabka taageersan Shariif Xassan Shiikh Aadan oo ay ku tilmaamtay inay ahaayeen qaswadayaal kasoo horjeeda baarlamaanku inay gutaan shaqooyinkooda caadiga ah.
Waa markii 3-aad oo xarunta golaha shacabka ee Moqdisho ay isku gacan-qaadaan mudanayaasha baarlamaanku, waxaana carqalada baarlamaanku ay caqabad ku noqon-kartaa geedi-socodka Roadmap-ka.
Baahin: Arbaca, Jan 04, Axmed Jookar ~ Daljir ~ Bossaso. Feer & faralaab kadib, Madoobe Nuunow oo loo doortay afhayeenka baarlamaanka federaalka; Bandhig ganacsi oo lagu soo bandhigay sanaaca wadani ah – gaari lagu sameeyey Galkacyo & marawaxad dab ka dhilinaysa hawada; Warbixin ku saabsan shirka Khaatumo II ee ka socda degmada Taleex, Sool; Lacag faalsa ah oo lagu qabtay Galkacyo & maamulka oo uga digay shacabka.
Baahin: Isniin, Jan 02, Maxamed C. Kooshin ~ Daljir ~ Garowe. Xildhibaanada baarlamaanka federaalka oo mar kale isugu-gacan-qaaday fadhigii golaha ee maanta; Puntland oo soo dhawaysay hawlagallada amni ee ka bilawday gobollada dhexe & ka saarida Al-shabaab ee Beledweyn; “Anaa hogaaminayey dagaalkii Ethiopia (shalay); Aragtida aan qabo maanta ma dhibsanaayo Ethiopia” Yusuf Indhacadde.